„Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini“ abakwi-inthanethi abanamanani ama-dollar ayisigidi. „NgoMashi we-2015“, umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch wabekwa ku- 1 mlrd. Noma kunjalo, ukubalwa kwentengo kungabhekwa njengokuncishiswa okuthile ngabathile, uFarfetch akuyena ukuphela kwabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ayizigidi eziningi. „Gal Gal“, „Aš-laimingų grupė“, „Aš-batų apakinimas“, galite nešioti į viršų, o ne paversti juos į viršų, o ne kuo daugiau, o galiausiai – „zokuzibophezela“.
Ngakho-ke uma unokuthambekela okubheke emcabangweni, wokuthi ungaqala ibhizinisi lokuthengisa ngemfashini elingelakho, ngizokukhombisa ezintweni ezimbalwa ezisiza ukwenza ukuba abathengisi umfabuka ubeauwibauka ubwibauka ubeauwibaka ubwibauka ubwibauka ubwibauka ubwibauka ubwibaka ubwibaka obufka.
1 „Ubukeka Kanjani Umthengisi Wefashini Elihle“?
2 Ukusingat nama-plugins afanele
3 Ukuqhafaza I-Pramonės pramonė
„Ubukeka Kanjani Umthengisi Wefashini Elihle“?
Mane, ngoba sihlose ukugxila kakhulu kumasayithi we-WordPress. Ake sibheke ukuthi ezinye zezindikimba ezingcono ze-WordPress futhi ubone ukuthi ziqhathaniswa kanjani neFarfetch.
„Buka kuqala i-Rosette“
Vardas yiyiphi yezingqikithi izosebenza kahle kakhulu ukudala isitolo se-traffic esitolo esiphakathi sezemfashini noma imikhiqizo efanayo yokudayisa.
Ayikho netvarkos lokho okuhlala njalo futhi okuncane lapho kunokwenzeka khona
Aš-oda elilula bese uhlola amakhasi
Kunento eyodwa futhi okufanele uyiqaphele, ezinye izingqikithi zemfashini ngokukhethekile entweni eyodwa yezinto ezimbili ukubhuloga noma ukuzithengisa. Ingqikithi leidžia jums yokuthengisa yemfashini ingasetshenziselwa ukudala amabhlogi anamandla, ngenkathi inganqikazi amandla wewebhusayithi yakho ukuthengisa imikhiqizo.
Ngokunye, ungase futhi uqale isitolo sefashini Thenga. Parduotuvės parduotuvė jindlela engcono kakhulu yokwakha noma yikuphi iwebhusayithi yokuthengisa okufaka phakati amawebhusayithi wefashini.
Ukusingat nama-plugins afanele
„WPEngine“ tipo naujovės („Ukusingathwa“, „WordPress“ epitetas, aš -20% naudoju benzisa ikhodi yokuphromotha "WPE20") noma usebenzisa IVPS yolwandle lwedijithali. Futhi uma uthatha isinqumo sokuhamba neseva yangasese yangasese noma ukusingathwa okwabiwe, uzodinga insiza you CDN efana MaxCDN ukukhonza izithombe zakho. Izingosi zefashini zivame ukuba abezindaba eziyindayo futhi i-CDN izosiza ukugcina umbane wakho wewebhu ube lula.
Ngaphandle kwalokho, uzodinga ama-plugins ambalwa ama-webhusayithi we-WP angawathola ewusizo. Ngicabanga nokuthi ukwenziwa kweinjini yokusesha kanye nokufakwe kunqolobane yesiza kuzobaluleka kakhulu. Ngingancoma I-WP Rocket futhi I-Yoast SEO naudojimo būdai.
Ukuqhafaza I-Pramonės pramonė
Ukube bengingaqala iblogi yemfashini namuhla, ngizohluleka kabi. Ngani? Ngilahlekelwe ngomusa olwazini ngomkhakha wezemfashini. Ungathi, „kuhle! Lokhu kuyiqiniso kunoma yimuphi imboni “. Kungenzeka kube njalo, kodwa ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ikakhulukazi embonini yezemfashini futhi kuseduze ukuba kungenzeki ukuzizwa unesithakazelo sangempela nentshisekelo yemfashini.
Abantu abathengi izingubo noma imikhiqizo yefashini ngoba bayathanda ngempela. Bathenga izingubo nemikhiqizo yefashini ngoba bangathanda ukuthola isitembu sokuvunywa komakhelwane babos, abangane babos nabathandekayo babos. Futhi imfashini yezinga eliphezulu indgala indėnų abaktu abakubona dabar.
„UMaria Sharapova Ungumdlali we-tennis omkhulu futhi wenza imali eyi- $ 22 mln. Ngokuvumela futhi okwamanje kuphela okungaphezu kwezingu- $ 2 wezigidi nge turnyrai zangempela.
Ngoba umsubathi ongathengiswa kakhulu futhi yisizathu esifanayo esenza ukuthi abahola cishe bonke abanye abadlali bomdlalo wetennis abangaba ngcono kunaye kwithenisi. Ngimthatha ngoba umehluko wemali engenayo ngokusebenzisa umsebenzi oyisisekelo wokuthola imali ngama-patvirtinimai kwisilinganiso se-10: 1. Uzothola ukuthi okufanayo kuyasebenza kakhulu komunye umdlalo othengiswayo. „Abathandi bebhola“, „amaWorld“ čempionai „šachmatais“, „kanba nabasubathi abangama-Olimpiki bonke benza imali enhle ngokwenza izincomo“.
Enyway į phakathi kwabo bonke abathengisi bemfashini abaphumelelayo engiyicwaningile – bonke banendaba eyingqayizivele nethembekile yokudlulisa. Ukuzama ukuqala isitolo sezitolo zemfashini ngaphandle kwendaba nophawu ongalukhulisa kahle kufana nokuzama ukukala intaba emimvini.
Okokugcina, ngithanda ukukukhomba lapho uthola khona izihloko ezimbili ezinhle kakhulu ezibonisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukumaketha, maqondana nokwakha isitolo semfashini esiku-inthanethi noma esingaxhunyiwe ku.
„Izinto ze-34 šiojeza abathengisi beMafashini abangazayo“.
„Indlela Yokwakha I-Multi Million Dollar“ e-commerce verslas Ibhizinisi Didesnis – beveik 0 USD – biudžetas „Yokuthengisa“.
Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani amais dolari ayisigidi. NgoMashi we-2015, umthengisi wemfashini wokunethezeka